राष्ट्रपतिले एक्कासी किन बोलाइन् दुई मन्त्रीलाई शितल निवास ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > राजनीति > राष्ट्रपतिले एक्कासी किन बोलाइन् दुई मन्त्रीलाई शितल निवास ?
October 20, 2020 October 21, 2020 News Desk102
भट्ट पूर्व माओवादी धारका भएपनि अहिले सत्तासिन दल buy hcg uk नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताका रुपमा गनिन्छन् । पार्टीभित्र नवनियुक्त मन्त्रीमण्डल पूर्नगठन, राजदुतहरु नियुक्ति र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता लगायतका कारण फेरि पनि पार्टी भित्र कलह देखा परेको छ । दशैपछि यो विवाद नेकपाभित्र फेरि वल्झिने देखा परेपछि राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाभित्रको अन्तरकलहमा पनि चासो र चिन्ता देखाउदै आउने भित्र पर्छिन् ।
पूर्व माओवादी छिन्नभिन्न भएकोमा प्रचण्ड दुःखी
June 17, 2020 June 17, 2020 Raju Thapa